गोपाल काफ्ले पथरी, साउन १९
बेलबारी फुटबल क्लब बेलबारीले मोरङको पथरीमा सम्पन्न खुला नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। पथरी स्पोर्टिङ क्लबको खेल मैदानमा बिहिबार भएको फाइनलमा डिएफसी लक्ष्मीमार्गलाई १-०ले हराउँदै उपाधिमाथि कब्जा जमाएको हो। बेलबारीलाई जिताउन निरज बस्नेतले निर्णायक गोल गरे।
दोस्रो हाफको २९ औं मिनेटमा बेलबारी भुषण लिम्बुको फ्रिकिकलाई सदुपयोग गर्दै निरजले सुन्दर गोल गरेका थिए।
विजेता बेलबारीले ट्रफिसहित नगद २० हजार र उप-विजेता लक्ष्मीमार्गले १० हजार नगद पाएका थिए।
विजेता र उपविजेता दुबैलाई मोरङ फुटवल संघका अध्यक्ष र पथरी स्पोर्टिङ क्लवका अध्यक्ष धनकुमार तामाङले पुरस्कार वितरण गरे।
यसैबीच मोरङको पथरी घर भई हाल विदेशमा रहेका दुई युवाले स्थापना गरेको सूर्यबहादुर सोम्याहाङ राई र जगतबहादुर सम्बाहाम्फे स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार मोरङका दुई पत्रकारलाई प्रदान गरिएको छ।
नागरिक दैनिकका पत्रकार चुमन बस्नेत र पथरीकै रेडियो सिम्रिकका लोकबहादुर चौहानलाई जनही १०-१० हजार रूपैयाँ राशीको उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। ‘स्व.सूर्य बहादुर सोम्याहाङ राई र स्व. जगत बहादुर सम्बाहाम्फे स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार’को अक्षयकोषका लागि विदेशमा रहेका मनिष सम्बाहाम्फे र अजय शेनले १ लाख रूपैयाँको अक्षयकोश स्थापना गरेका हुन्।
पथरी स्पोर्टिङ क्लबको मातहतमा रहने गरी स्थापित उक्त कोषबाट हरेक वर्ष मोरङ कार्यक्षेत्र बनाएर कलम चलाउने २ पत्रकारलाई ‘स्व.सूर्य बहादुर सोम्याहाङ राई र स्व. जगत बहादुर सम्बाहाम्फे स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार’ दिइनेछ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन १९, २०७४, ०६:५०:३२